जेनेभामा ‘सक्षम श्रमिक, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम देखि वृद्धभत्ता सम्मको चर्चा - VOICE OF NEPAL
जेनेभामा ‘सक्षम श्रमिक, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम देखि वृद्धभत्ता सम्मको चर्चा
२७ जेष्ठ २०७६, सोमबार १५:४१ 131 ??? ???????
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टीका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको योजना अगाडि सारेको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको सेन्टेनरी सेसनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपाल समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको भन्दै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारामा ‘सक्षम श्रमिक’ थपे।
‘नेपालले लामो समय राजनीतिक आन्दोलनमा गुजारेको छ। मैले मेरो जीवनको पाँच दशक नेपाली जनताको समानताको अधिकारका लागि लडेको छु, मेरो नेतृत्वमा बनेको सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीसहितको नारामा समृद्धि तर्फको यात्रामा अगाडि बढेको छ,’ उनले अगाडि नेपालीमै भने, ‘सक्षम श्रमिक समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली।’ सक्षम श्रमिकको आधारमा नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बन्ने बताए।
उनले नेपालले श्रम सम्बन्धी कानुनलाई आइएलओको प्रावधान अनुरूप तय गरिएको भन्दै कामदारहरूलाई असमान व्ययवहार नभएको दाबी गरे।
उनले श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाइएको बताए। ‘नेपालले प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माणसँगै समानता, सामाजिक न्यायको आधारमा निर्माण गरेको छ। सहभागिता, र वाक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी संविधानबाटै गरिएको छ,’ उनले अगाडि भने, ‘सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा कामको अधिकार, ट्रेड युनियनको अधिकारको ग्यारेन्टी संविधानबाटै गरिएको छ।’
उनले संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि ऐन नियमहरू बनाएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले कामदारहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको घेरामा ल्याइएको बताए।
‘सामाजिक सुरक्षाको वृहत् स्किम गत वर्ष देखि सुरु गरिएको छ। जसले उनले कामदार, रोजगार दाता र सरकारबाट यसको कोष तयार गरेर सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाइएको छ।’
नेपालले २५ वर्ष देखि वृद्धहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिरहेको र एकल महिलाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाइएको बताए। उनले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई क्रमिक रूपमा बढाउँदै लगिएको पनि बताए।
उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर यसले रोजगारको व्यवस्थाका साथै स्वरोजगारको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको बताए।
नेपालले नयाँ श्रम सम्बन्धी कानुन बनाएको भन्दै यसले कामदारको सुरक्षा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। आइएलओको प्रावधान अनुसार ट्रेड युनियन कानुन निर्माण गरिएको उनले बताए।
उनले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढेको भन्दै गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनहरूबाट ४१ प्रतिशत महिलाहरू विभिन्न तहमा निर्वाचित भएको बताए।
नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू उच्च जोखिममा रहेको उनको भनाई थियो।
सगरमाथा र बुद्धको जन्मभूमिबाट विश्वलाई शुभेच्छा प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रविधिको विकाससँगै परम्परागत काम प्रतिस्थापन भइरहेको बताए। प्रविधिले नयाँ अवसरसँगै चुनौती पनि दिइरहेको बताए।
श्रमको क्षेत्रमा लैंगिक समानताको प्रश्न पनि खडा भएको उनको भनाई थियो। उनले जलवायु परिवर्तनले पनि कार्यमा असर पारेको उनको भनाई थियो।
समान ज्यालाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने भन्दै उनले यसले श्रमिकहरुबीच समानताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
नेपालले अथाह प्राकृतिक सम्पदाको धनी भएको भन्दै कामको अथाह सम्भावना भएको उनले बताए।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली जेनेभामा सोमवार साइडलाइनमा उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त रहे। प्रधानमन्त्री ओली आजै संयुक्त राज्य बेलायत जाने कार्यक्रम रहेको छ।
जेनेभामा ‘सक्षम श्रमिक, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम देखि वृद्धभत्ता सम्मको चर्चा को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।